CC र BCC को मतलब के हो: उत्पत्ति र ईमेलमा प्रयोग | ग्याजेट समाचार
केहि चीज जुन प्राय: प्रयोगकर्ताहरू नियमित रूपमा गर्दछन् ईमेल पठाउनु हो। यो गर्नका लागि तपाईसँग एक मात्र लोकप्रिय प्लेटफर्महरू जस्तै जीमेल, आउटलुक वा याहू, अन्यमा खाता हुनुपर्दछ, प्राप्त गर्न वास्तवमै सजिलो छ केहि। सन्देश पठाउँदा, दुई विकल्पहरू देख्न सामान्य छ, जुन सीसी र बीसीसी हुन्।
यी CC र BCC विकल्पहरू अवस्थित छन् सबै ईमेल प्लेटफार्महरूमा। यद्यपि धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यी अवधारणाहरूको अर्थ के हो वास्तविक रहस्य हो। तसर्थ, तल हामी तपाईंलाई यसको बारेमा सबै कुरा बताउनेछौं। तिनीहरू के हुन् वा मतलब, साथ साथै तपाईंको जीमेल खातामा कसरी प्रयोग गर्ने।
1 CC को मतलब के हो र यो केको लागि हो?
2 CCO के हो र यो केको लागि हो
3 कसरी Gmail मा CC र Bcc गर्ने
CC को मतलब के हो र यो केको लागि हो?
इ-मेल लेख्दा, हामीले यो सँधै व्यक्त गर्नु पर्दछ हामीले जसलाई पठाउँदैछौं। यो विकल्पको छेउमा हुन्छ जब हामी यो सीसी विकल्प खोज्छौं। सामान्यतया यो विकल्प हो जुनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ, ईमेल खातामा यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन। यसको मतलब के हो?
CC यस्तो चीज हो जुन सामान्यतया "प्रतिलिपिसहित" अनुवाद गरिन्छ। यद्यपि यो एक शब्द वा संक्षिप्त नाम हो जुन लामो समयको लागि वरिपरि भएको थियो। इन्टरनेटको अस्तित्व पहिले नै। यसको मूल अर्थ कार्बन प्रतिलिपि हो, समयलाई जनाउँछ जब टाइपराइटरहरू पत्राचारको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। सामान्य कुरा यो थियो कि कार्बन पेपर दुई पाना बीच प्रयोग गरिएको थियो, ताकि मूल प्राप्त भयो।
तसर्थ, एक ईमेल खाता को मामला मा, सीसी को उपयोग मतलब हामी मा भनिएको ईमेल मा समावेश गर्न चाहान्छौं एक प्राप्तकर्ता जुन हामी सचेत हुन चाहन्छौं कि हामीले यो सन्देश पठाएका छौं। हामी उदाहरण दिन्छौं ताकि यो अझ राम्रोसँग बुझ्न सकियोस्। तपाईको हाकिमले तपाईलाई विशेष ग्राहकलाई ईमेल पठाउन आग्रह गर्दछ। त्यसोभए तपाईंको हाकिमले यो जान्न सक्दछ कि तपाईंले यो व्यक्तिसँग सम्पर्क राख्नु भएको छ, ईमेल पढ्न सक्षम हुनुको साथै, सीसी प्रयोग गर्दा तपाईंले आफ्नो मालिकको खाता राख्नुभयो। यसैले, तपाईंसँग एक प्रतिलिपिमा पनि पहुँच छ।
यो एउटा यस्तो प्रकार्य हो जुन हामी धेरै अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौं। विशेष गरी कामको वातावरणमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। सामान्य कुरा यो हो कि हामी प्रमाणहरू पाउन वा एक व्यक्तिलाई ईमेल पठाएको प्रमाणित गर्न सक्षम हुनको लागि सीसीको प्रयोग गर्दछौं। वा यदि हामी अर्को व्यक्ति सन्देश पढ्न सक्षम भएको चाहन्छौं भने, यदि हामी उनीहरूले यस बारे उनीहरूको राय दिन चाहन्छौं भने।
CCO के हो र यो केको लागि हो
अर्को तर्फ, ईमेल लेख्दा, सीसी विकल्पको साथ हामी CCO संग पनि भेट्छौं। सम्भवतः एक्रोनिम द्वारा त्यहाँ पहिले नै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले अन्तर्ग्रहण गर्छन् कि त्यहाँ दुई सर्तहरू बीचको सम्बन्ध छ, त्यस्तै त्यस्तो छ। यद्यपि यस मामलामा त्यहाँ एक अत्यावश्यक पक्ष छ जुन यसलाई भिन्न बनाउँछ।
यस अवस्थामा, जब हामी बीसीसी सेक्सनको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी यसलाई लुकेका प्रतिलिपिको रूपमा अनुवाद गर्न सक्दछौं। यो सबैभन्दा सामान्य अनुवाद हो जुन यस अवधारणालाई दिइएको छ। यद्यपि यसलाई "कार्बन प्रतिलिपि सहित" को रूपमा पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। दुबै धेरै बारम्बार छन्। फेरी, यो दोस्रो अनुवाद इन्टरनेट को अस्तित्व पहिले यसको मूल छ कि केहि छ। विगतमा, प्रतिलिपि गरिएको कागजातहरू प्रयोग गरियो, ताकि अन्तिम पाना (ट्रेसिंग पेपरको) फाइलिंग वा लुकाउनको लागि प्रयोग गरियो।
यस अवस्थामा, बीसीसी प्रयोग गर्दा, तपाईले कोही चाहनुहुन्छ जो सजग छ जुन हामीले इ-मेल पठाएको हो। तर हामी यसका मुख्य प्राप्तकर्तासँग प्रमाणहरू लिन चाहँदैनौं यो बाट। त्यो हो, यदि हामी पहिले देखि उदाहरण ले। हामी एक ग्राहक ईमेल र हाम्रो मालिक सीसीओ मा राख्छौं। त्यसोभए हाकिमले ईमेल देख्न सक्दछन्, तर ग्राहक जसलाई ईमेल पठाईएको छ कि मालिकले यसलाई पनि प्राप्त गरिसकेका छैनन्।
कसरी पत्ता लगाउने यदि ईमेल ठेगाना अवस्थित छ भने
यो CC सँग मुख्य भिन्नता हो। पहिलो केसमा, सीसीको अनुसार, प्रापकले देख्न सक्दछ कि हामीले यसलाई हाकिममा पनि पठाएका छौं। तर यदि हामी सीसीओ प्रयोग गर्दछौं, भने कि प्रापक देख्न वा जान्न सक्षम हुनेछैन यदि हामीले यो अर्को व्यक्तिलाई पठाएको हो भने। त्यसैले परिस्थितिमा निर्भर गर्दै यो एक वा अर्को प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन सक्छ। विशेष गरी काम वातावरणमा।
सामान्यतया, हामीले आज प्रयोग गर्ने ईमेल ग्राहकहरूले कुनै पनि केसमा सीसी वा बीसीसी प्रदर्शन गर्दछन्। यद्यपि उत्तरार्द्धको मामलामा यो सधैं हुँदैन। त्यहाँ केहि प्लेटफार्महरू छन् Bcc को सट्टा हामी बीबीसी भेट्छौं। ती अंग्रेजीमा परिवर्णी शब्द हुन्, जसको अर्थ ब्लाइन्ड कार्बन प्रतिलिपि हो। यो जान्न राम्रो हुन्छ कि यो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ एक प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन केवल अंग्रेजीमा उपलब्ध छ।
कसरी Gmail मा CC र Bcc गर्ने
धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूले जीमेललाई उनीहरूको मेल प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यद्यपि हामी ती सबैमा CC र BCC प्रयोग गर्न सक्दछौं समस्या छैन। तर हामी गुगल मेल सेवामा पहुँच गर्ने तरिका देखाउँदछौं। जबकि यो प्रकार्य प्रयोग गर्न को लागी तरीका सरल छ। जब हामीले कम्प्युटरमा जीमेल खोल्छौं, हामीले एक ईमेल लेख्नु पर्छ, स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ भागमा अवस्थित विकल्पमा क्लिक गरेर।
त्यसोभए, विन्डोमा जसमा भनिएको ईमेल रचना गर्न सकिन्छ खुल्छ। पहिलो लाइन हो जहाँ तपाईं ईमेल को प्रापक प्रविष्ट गर्नु पर्छ। यस लाइनको दायाँ तिर तपाईं CC र BCC विकल्पहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो केवल एक मात्र क्लिकको कुरा हो जुन तपाइँले त्यस समयमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्दा, एक रेखा तल राखिन्छ। यसमा हामीले त्यस व्यक्तिको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जुन हामी यो ईमेलको प्रतिलिपि लिन चाहन्छौं। सामान्यतया कम्पनीबाट वा अध्ययन केन्द्रबाट कोही।
यदि हामी यसको सट्टा Bcc प्रयोग गर्न चाहन्छौं भने, सहि उस्तै कुरा हुन्छ। एक रेखा तल देखा पर्नेछ जुन व्यक्तिको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्न को लागी त्यो ईमेल पठाउनु हो। यो चाहने प्रयोगकर्ताहरूका लागि, समान ईमेलमा CC र Bcc पठाउन यो सम्भव छ। त्यसैले यदि तपाईं यो विकल्प प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सधैं सम्भव हुन्छ। यी विकल्पहरू प्रयोग गर्न यो सरल छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » CC र CCO को मतलब के हो